Olee otú iji VLC na-egwu Blu-Ray fim
Nkebi nke 1: VLC Webata
Part 2: N'ihi na Windows Ọrụ
Part 3: N'ihi na Mac ọrụ
VLC bụ ahụkebe media ọkpụkpọ. Ọ bụghị nanị otu n'ime ndị kasị ewu ewu free media Player dị na net, ma otu nke nnọọ ole na ole na nwere ike igwu multiple audio nakwa dị ka video formats seamlessly. Ọ bụ n'ihi na nke a bụ eziokwu na VLC ghọrọ-ewu ewu na a nnọọ obere oge. Ọ bụ ihe na mfe iji mgbasa ozi ọkpụkpọ na nwere ike igwu MPEG, QuickTime, MKV, AVI, DivX, 3GP na ọtụtụ ndị ọzọ formats.
Dị maka ngwaọrụ-agba ọsọ na nile di iche iche nke sistem, ọ ga-abụ Windows, Mac, Android ma ọ bụ iOS wdg, VLC achịwo na mgbasa ozi ọkpụkpọ ahịa n'ihi na ihe karịrị afọ iri ugbu a. Tinyere ya ikenyeneke mbiet egosipụta ọtụtụ ihe, ọ nwere a ọrụ enyi na enyi interface nakwa na ike ga-eji na-akwa ala na nkasi obi. Ọ na-nwere ọtụtụ customization nhọrọ na-agbakwụnye na nkasi obi nke ndị ọrụ na njedebe nke ụbọchị.
Otu n'ime ndị kasị ịtụnanya ọhụrụ atụmatụ nke VLC bụ na ya ugbu a na-akwado na-egwu azụ nke Blu-Ray fim. Ee, nke ahụ dị mma!
The 2.0 na mgbe e mesịrị version nkwado Blu-Ray media playback na ụfọdụ mmezi arụmọrụ. N'okpuru ebe nyere bụ a Nduzi na ya dị ka zoro site VLC si Forum. Na ya ị pụrụ ịnụ ụtọ ụfọdụ Blu-ụzarị na kọmputa gị kpam kpam. VLC 2.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị version-akwado ndị na Blu-Ray playback. Ị nwere ike ibudata ọhụrụ version si VLC ukara website. Otú ọ dị, maka iwu ihe mere, AACS na BD + DRM ọbá akwụkwọ na igodo ka na-adịghị Ẹnam ekese. Ọ pụtara na naanị Blu-Ray diski na AACS ọba akwụkwọ kpughere na-akwado.
Nzọụkwụ 1: Gaa: Videolan.org, mgbe ahụ, ibudata ma wụnye ọhụrụ version nke VLC maka gị usoro.
Nzọụkwụ 2: Gaa: http://vlc-bluray.whoknowsmy.name/ ibudata igodo nchekwa data (KEYDB.cfg) na AACS ike Ọbá (libaacs.dll maka Windows ma ọ bụ libaacs.dylib maka Mac).
Nzọụkwụ 1: Mepee njirimara gị ebe ("C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara gị \_ AppData")
Nzọụkwụ 2: Kwado echiche zoro ezo faịlụ na nchekwa (n'okpuru nchekwa Nhọrọ - View taabụ wee họrọ "Gosi zoro ezo faịlụ ..."> họrọ 'ok')
Nzọụkwụ 3: Open "AppData" ndekọ ma ọ bụ ike a na nchekwa na aha ya aacs
Nzọụkwụ 4: Ebe ebudatara KEYDB.cfg faịlụ na nsomebefaịlụ a ozugbo.
Nzọụkwụ 5: Gaa "c: \_ Mmemme faịlụ" ma ọ bụ "c: \_ Mmemme faịlụ (x86)", ma ọ bụrụ na-agba ọsọ 64bit
Nzọụkwụ 6: Ịnyagharịa "VLC" ndekọ, na-akpali ndị libaacs.dll faịlụ n'ime ya.
Nzọụkwụ 7: Ugbu a, ị nwere ike mfe egwu Blu-Ray diski na VLC on Windows for free. Rịba ama: The ọhụrụ VLC ka na-adịghị nwere menu nkwado ma.
Nkebi nke 3: N'ihi na Mac ọrụ
Ị nwere ike ịnyagharịa kwekọrọ ekwekọ na nchekwa ma-akpali n'ime mkpa faịlụ dị ka ndị a. Gaa: http://vlc-bluray.whoknowsmy.name/, na-na mkpa faịlụ.
Nzọụkwụ 1: Ebe igodo nchekwa data na / Library / Mmasị / aacs / (ịmepụta ya ọ bụrụ na ọ na-adịghị adị).
Nzọụkwụ 2: Right-pịa VLC, họrọ "Gosi ngwugwu ọdịnaya" na-etinye na faịlụ na ọdịnaya / MacOS / lib /.
NDỤMỌDỤ: VLC adịghị ma na-akwado Blu-Ray menus otú ị ga-aka họrọ aha na-egwu. Ọzọkwa, ọ bụghị ihe niile Blu-Ray fim na-akwado.
Nkebi nke 4: Wondershare Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ oké ọzọ ka VLC media ọkpụkpọ. Ọ nwere niile iche iche atụmatụ na na-achọrọ ụbọchị ndị a na akụkụ kasị mma bụ na ọ dịghị achọ ka ị na-eme ihe ọ bụla nke akwụkwọ ntuziaka ọrụ na ntọala. Dị nnọọ ka VLC, ọ nwere ike igwu fọrọ nke nta bụla mara media format, nri nke igbe. The media ọkpụkpọ nwere a ngwa ngwa mkpali na ike ga-eji maka nbudata, mmekọrịta, nkwanye na-ekere òkè media faịlụ n'etiti dị iche iche na usoro na dị maka iOS, Mac, Windows na Android dị ka mma.
Olee otú dezie Video footage
> Resource> Video> Olee otú iji VLC na-egwu Blu-Ray fim?